Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Grenada » Muwaadinnimada maalgashiga ma xumaa?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Grenada • Wareysiyo • Investments • News • Dadka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Jinsiyada Grenada ee iibka ah
Baasaboorka iyo Jinsiyadda waa la iibinayaa. Liisaska dalal iibinaya baasaboor raqiis ah ama aan raqiis ahayn ayaa laga yaabaa inay adduunkan u furaan dambiyada maalgashiga iyo kuwa kale.
Dal yar oo si weyn ugu tiirsan dalxiiska, jasiiradda Kariibiyaanka ah ee Grenada ayaa soo jiidanaysa dareen aan loo baahnayn oo ku saabsan sida ay dawladeedu cadaawadda ugu noqotay mid ka mid ah mashaariicdeeda martigelinta ee mustaqbalka dhow leh.
Kimpton Kawana Bay, oo ah goob dalxiis oo raaxo leh / hoy lagu maalgeliyo iyada oo loo marayo barnaamijka gaarka ah ee Jinsiyadaha ee barnaamijka maalgashiga ayaa joogsaday.
Hogaamiyaha maalgashiga waa Warren Newfield, oo ilaa May 2021 soo noqday safiirka Grenadian-ka-weyn iyo mid ka mid ah seddexda qunsul ee guud ee dalka Mareykanka.
Muwaadinnimada iyada oo loo marayo maalgashi waa barnaamij laga heli karo isla markaana lagu dhiirrigeliyo dalal badan oo Kaaribiyaanka ah, xitaa waddamada sida Malta, Cyprus.
Abaalmarinta muwaadiniinta cusub waa mid aad u weyn oo ku daadata xitaa si loo helo marinka Mareykanka.
Grenada ma bedeshay maskaxdeeda waxayna halis ugu jirtaa maalgashi weyn oo dalxiis?
Maaddaama dalal badan ay adkeeyeen xuduudahooda iyo waddooyinka ay u marayaan soogalootiga, warshad cusub ayaa ka shaqeyneysa in laga gudbo xayiraadahaas - iyadoo lagu bixinayo lacag culus. Warshadaha waxaa lagu magacaabaa Muwaadinimada maalgashiga.